"Ubuntu na-agwụ m ike, m ga-anwale ihe siri ike karị, dị mgbagwoju anya, dị ka Linux" | Site na Linux
"Ubuntu na-agwụ m ike, m ga-anwale ihe siri ike karị, dị mgbagwoju anya, dị ka Linux si kwuo"
Achọrọ m ịkekọrịta obere egwuregwu a, achọtara m ya DeviantArt otu ụbọchị, echetaghị m onye ọrụ ma ọ bụ ihe ngosi ya, agbanyeghị m kesara ya.
Echere m na ọtụtụ n'ime anyị ga-eche na a mata ha, n'ihi na n'ụzọ doro anya, ọ bụ ọnọdụ dakwasịrị ọtụtụ n'ime anyị HAHAHA.
Pịa na ihe oyiyi iji hụ ya n'ogo zuru oke:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » "Ubuntu na-agwụ m ike, m ga-anwale ihe siri ike karị, dị mgbagwoju anya, dị ka Linux si kwuo"
Anọ m na-eji Ubuntu afọ ole na ole, tupu m jiri SUSE na OpenSUSE.
N'oge na-adịbeghị anya ọ dị m ka ọ bụrụ na m gbanwere ma na-anwale distro ọzọ, ọkachasị m na-achọ mkpagharị na Gnome maka 64-bit PC.
Agbalịrị m Gentoo na, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-ewe oge dị ukwuu maka mkpokọta, enwere m mmasị na ya n'ihi na n'oge na-adịghị anya, amụtara m ọtụtụ ihe. Mana, n'agbanyeghị ijikwa iji wụnye Gnome na-arụ ọrụ nke dị mfe, enweghị ụzọ iji wụnye asụsụ Spanish.
N'ihi ya, m gbalịrị Arch Linux. Ntinye nke gburugburu Gnome na-arụ ọrụ dị ngwa ngwa, mana ọ nweghị ụzọ esi hụ ya na Spanish.
Yabụ ... Ana m esoro Ubuntu. Zuru oke maka gburugburu desktọọpụ, yana ọtụtụ PPA ma ọ bụrụ na ịchọghị ịme ka ndụ gị gbakọọ, ọ bụ ezie na nhọrọ ị chịkọtara dị mgbe niile.
Ikwuru ihe, ekwuru m mgbe ọ bụla na enwere ihe atọ masịrị m banyere Ubuntu:
1- Isiokwu Gtk.
2- Isi iyi Ubuntu.
3- Ndị PPA ..
Ọ bụ eziokwu na enwere ọtụtụ sọftụwia dị njikere ịwụnye na Launchpad… 😀
Enweghị m mmasị na isiokwu Ubuntu, ọbụnadị mgbe m jiri ya, mkpụrụ edemede nke gnome 3 na-eweta (na ndabara) enweghị ihe ọ bụla ga-emere Ubuntu anya, ọ zuru oke na-emetụghị ihe ọ bụla aka. Ndị PPA dị ezigbo mma, agbanyeghị na ụfọdụ na-enye isi ọwụwa ma a bịa na imelite ụdị (ma ọ bụ ha nyere) Amaghị m etu esi arụ ọrụ ugbu a.
Mana RR nke arch, pacman na aur bu 3 karia ihe mere m ji jiri archlinux, pacman di oke nma.
Firstbọchị mbụ Chukwu pịa
sudo pacman -S ka-e nwee ìhè
ewe mee ìhè ahụ ma ọ hụ na ọ dị mma ma kpọọ ìhè ahụ ụbọchị ahụ, ọchịchịrị ahụ wee kpọọ windo, ana m asị ya n'abalị 😀
Ọ dị mma maka ihe ndị masịrị agba. Ahụbeghị m font mara mma karịa Font Ubuntu maka sistem m. Na mbụ m ji Aller (nke Dalton Maag si nweta Ubuntu Font). Cantarell, isi iyi nke Gnome emeghị ka m kwenye. Ma hey.
Nsogbu kachasị na Arch ma ọ dịkarịa ala maka anyị, bụ njedebe njedebe na njikọ ịntanetị.
Aghọtara m na ebe Wi Fi abụghị iwu, yabụ aghọtaghị m ihe nsogbu njikọ ịntanetị dị
Obi ike, apụrụ m inye gị seminarị niile gbasara otu esi arụ ọrụ ebe a ị gaghị aghọta. Mana m ga-eme ka ọ dịrị gị nfe, lee, anyị enweghị ịntanetị n'ụlọ, dịka ikekwe ha nwere ya na mba gị, anyị jikọtara ọrụ, yana njikọ 256Kb, yana 32Kbs nke nbudata nbudata ... ị chere na anyị nwere ike imelite megide ịntanetị mgbe ụfọdụ oge anyị na-agbada na 5kbps? Nke ahụ na-agụtaghị mmachi ndị ISP anyị tinyere.
Chaị, ị gaghị emetụ igodo ahụ aka .. 😀
Anaghị m ekwu banyere ọsọ ọsọ ma ọ bụ ihe ndị dị ebe ahụ (isiokwu nke metụrụ eriri ahụ ozugbo).
Nke ahụ bụ ihe ị na-ekwu na-ada m dị ka enweghị nkwekọ nke kaadị netwọk, ihe niile dabere na IP, ọ bụrụ na ọ dị ike ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe, onye ọ bụla chọrọ nhazi ya.
Nweta nkwalite? You na-eji Debian Stable ma ọ bụ Nnwale? Ọ bụrụ na ị na-anwale ihe ngọpụ ahụ abaghị uru (m ghọtara na ọ na-agagharị ma ọ bụ ihe yiri ya), KZKG ^ Gaara enweela ike imelite Arch Linux ... Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya, ọ bụ eziokwu.
Nwoke ekwekwala ara
Akwụkwọ edemede Ubunto m na - edegharị na ihe ndị ọzọ, echere m na enwere m ya na Arch
Jo Simon, dịka m kwuru na e nwere ezigbo ndị nduzi maka nkesa ndị a, yana ịgwa gị na ịhapụ ịhapụ archwiki ị ga-ahapụ archlinux gị ka ịchọrọ.
foto m nke di na Spanish. http://www.imagengratis.org/images/pantallazcl2pc.png
Enwere ọtụtụ faịlụ nhazi ị ga-emetụ iji hapụ ya na Castilian / Spanish.
/ wdg / rc.conf
n'ahịrị na ọ na-ekwu
LOCALE = »en_US.utf8 ″ ị hapụ ya LOCALE =» es_VE.utf8 ″ maka m n'ihi na m si Venezuela, ị ga-ahụ obodo ị nwere ma tinye ya.
TIMEZONE = »America / Caracas» (nke a bụ otu n’ime ihe izizi mgbe ị na-etinye cd ka ọ wụnye, mgbe ịhọrọ keymap na ịhọrọ usoro ntinye, ị ga-abanye mpaghara oge.
KEYMAP = »la-latin1 ″ (nke a bụ ihe mbụ mgbe ị wụnye ya na iwu km) na nke m la-latin1, maka Latin American Spanish kiiboodu.
Kwuo, kwuo okwu na nke na-emetụtaghị ndabara, nke bụ United States English.
# is_VE.UTF-8 UTF-8 >>> bu_VE.UTF-8 UTF-8
n'aka nke gị site na mpaghara nke obodo gị. I mee nke ahụ tupu ịwụnye ya na desktọọpụ, mgbe ị na-etinye ya na ogige ndị ahụ, ọ bụrụ na ịmeghị ya tupu ị mepụta ogige ahụ.
Ọ bụghị na interface ị ga-agbanwe ma wepụta mpaghara, mana a na-eme ya otu oge, ọ ga-ewe ogologo oge, maka ịtinyeghachi n'ihi na ọ bụ ntọhapụ na-agagharị. Ọ fọrọ nke nta ka m mara otu esi etinye usoro ncheta dum, naanị m na-echefu iwu iji mepụta onye ọrụ m na otu niile m na-eji, mana m dere ya na mgbidi hahaha.
Nwoke, ee, ị ga-emere m nnukwu ihu ọma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa m otu m ga - esi nweta gnome ka ọ rụọ ọrụ ọzọ - m banye kdm - ma hazie ihe eserese eserese na sistemụ na kdm ma ọ bụ ọzọ - ..
Ugbu a, mgbe m tinyere ya, m na-abanye na Kde ma ọ bụ Xfce, m na-etinye ha niile dịka ọ bụ nnwale m / nkwado ndabere.
Enwere m ATI na arch na gallium ma obu AMD64.
Enweelarị m ya na ihe ọ bụla, n'oge m na-eche maka ntọhapụ ọzọ nke 3.2 na-abụghị beta, ọ gaghị abụ nzuzu.
3.2 abughizi beta, ọ "kwụsi ike".
Chei!!! Nwee obi uto ma mee ntuziaka ma anyi biputa ya ebe a na <° Linux hehehe
Bịanụ, gentoo dị ka arch nwere ezigbo nduzi, na leta ahụ enweghị ọnwụ. Nsogbu Gentoo bụ oge. Ọ bụ ezie na e nwekwara ngwugwu edere. Ma olee ihe ọchị inwe ya ma ghara ịchịkọta ngwa gị n'onwe gị. hahaha mgbe m jiri ya, naanị ihe m tinyere bụ isi (ụfọdụ umengwụ).
Anọ m na-eji GNU / Linux ogologo oge na n'ozuzu, achọrọ m ihe na-arụ ọrụ maka m yana enwere m ike ịkwadebe n'oge kachasị dị mkpirikpi. Ọ bụrụ na m hụrụ na m na-agbakọ ọtụtụ ma na-egbu oge dị ukwuu, echere m na m ga-ekokwasị onwe m na eriri USB 😀
Nke ahụ ọ bụ naanị igbu oge iji chịkọta ihe niile ịchọrọ iji rụọ ọrụ, ma ọ bụ naanị iji usoro kwụsiri ike na-eme ka ị bụrụ onye ọrụ dị elu, m ga-asị m
Ọfọn, enwere m LMDE - ya na ya nwere obi ụtọ - m na - alụ ọgụ na njiko - ọ na - amasị m ịnwe abụọ ma ọ bụrụ na ụfọdụ «ahuhu»
Sabayon, nke m gbakwara - dị ka ọtụtụ ndị ọzọ - na-aga ihe nkiri ma bụrụ Gentoo "maka umengwụ" site na iburu ngwungwu precompiled, ọ dị mfe ịwụnye karịa Arch.
Maka m, nnukwu uru nke Arch bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla nwere ike itinye site na isi mmalite yaourt -S mmemme, nke m ji wụnye chrome site na ngwugwu ụgwọ ya wee gaa sinima. Na mgbakwunye ịnwe ụdị nsụgharị ngwugwu kachasị ọhụrụ.
Nnukwu ọghọm ya bụ enweghị ndebiri na nrụnye nke na-ahọrọ otu ngwugwu ma hapụ akụrụngwa na-agba ọsọ na gburugburu ebe obibi / s.
Nhọpụta na iji mee ka mmụọ njiko dị na nzọụkwụ ọzọ nwere ike gbanwee.
Ugbu a, m ga-abanye dị ka mgbọrọgwụ na ọnọdụ ederede ma na-agba ọsọ kdm, amaghị m ihe kpatara hel nke Gnome anaghị arụ ọrụ maka m - ọ bụ na mbido - na m nọ na ndị ahụ.
Ọ bụrụ na, na mgbakwunye, agbakwunye asụsụ na keyboard nhazi na onye nhazi - ọ ga - eji aka mee ya - ọ ga - eme ka ọ dịkwuo mma n'echiche m.
Ka o sina dị, Easy Arch na-efu - enwere CD na-akwadoghị akwụkwọ, mana enweghị onye nrụnye -
Ekwesịrị m ịtọ ụda ahụ n'aka.
Na packagekit - onye nhazi ihe osise, anaghị arụ ọrụ nke ọma, mgbe ụfọdụ ọ naghị amalite, dị ka GDI.
Mgbe ịmalite kọmputa, ọ naghị ebuli xorg ahụ, mana ọ na-anọ na njikwa, na ebe ahụ ị ga-eji aka bulie KDM / GDM ???
Ọzọ nnọọ obere mgbagwoju anya Arch nhọrọ bụ Chakra Project 😉
Ee, ma Chakra abụghị KISS, ma e wezụga eziokwu na ọ dịla anya site na Arch
Ihe KDM na GDM, nwoke ọma, ị ga-etinye ya na ndị mmụọ ọjọọ ma tinyekwa dbus
Ọfọn, ọ bụghị na ahụ gwụrụ m ndị si Africa kama n'ihi mmejọ m. N'aka nke ọzọ, ụjọ jidere m ngwugwu Arch na-edeghị aha ma nwalee Gentoo, ọ bụ itinye akara ma pụọ ​​site na ịwụnye ya. Mgbe ahụ, m gbalịrị Sabayon mana ọ dara njọ, mgbe ahụ Arch na ruo ugbu a
@elav: Ntinye ahụ abụghị nke ukwuu, opekata mpe na Arch (ị nwara ya)
Bịa na onye otu, na Arch echichi bụ ihe mgbu na ịnyịnya ibu kwa, gịnị kpatara hell anaghị eme ya ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ karị? Na nke patioando ka m gwa gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye ọrụ nwere ahụmahụ anaghị agabiga ọtụtụ ọrụ, mana nke ọhụrụ ... na-agafe karịa ọrụ akpịrị na nkịta plastik.
Kedu ihe kpatara hel anaghị eme ya interface dị ụtọ karị?
Mgbe ahụ ọ ga - efunahụ amara niile ma ha ga - etinye ihe n'ime gị (onye nrụnye, gburugburu ...) kama ịwụnye ihe niile site na ncha na-etinyeghị ihe ndị ị na - ejighi
Na nke patioando ka m gwa gị.
Ejirila m diski ahụ dum, yana agbanyeghị na ọ siri ike karịa na Fdisk, ugbu a ọ dịghị otú ahụ
Ntinye dị mfe, interface dị mma, ma ọ bụ ị ga - ekwu na njikwa ahụ adịghị mma, nkewa ahụ bụ otu ebe ọ bụla, naanị. Enwere nduzi zuru oke na nke zuru ezu iji wụnye archlinux maka newbies. ọ na-arụkwa ọrụ maka mmadụ niile. Ihe kachasị mma ị wụnye sistemụ dịka ịchọrọ, na-enweghị ọtụtụ mmụọ ọjọọ ma ọ bụ ngwa ị chọghị.
lee anya na /etc/rc.conf:
1 modul na ndị mmụọ ọjọọ 5 na ihe niile m chọrọ ịrụ ọrụ, kama yana ngwa niile nke onye ọrụ ọ bụla na-eji, obere onye nbipute m na-enweghị na kọmputa a)
Emeela m obi ike idezi okwu gị, naanị m wepụrụ koodu gị mmmmmmmmmmmm etinye m ya na ọrụ mado anyị (http://paste.desdelinux.net). Emere m nke a n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ anaghị enwe mmasị ịgụ ihe na koodu dị ukwuu, ha na-ahọrọ ilekwasị anya n'echiche ndị ọrụ, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịgụ koodu rc.conf enwere njikọ ahụ - ^
Enwere m olile anya na ọ naghị enye gị nsogbu.
Nsogbu Arch dị mfe ... ọ dị oke mgbagwoju anya maka onye ọrụ ejiri wụnye LMDE, Mandriva na Ubuntu, ọ dị ka hel zuru ezu HAHAHA, ana m agwa gị n'ihi na rue mgbe m wụnye ya ihe dị ka ugboro 4 ma ọ bụ 5, Akwụsịrị m ịkwanyere ugwu HAHAHAHA ùgwù.
Banyere nhazi ahụ kpamkpam dịka ọ dị, ọ bụ ihe ịtụnanya ihe enwere ike ịhazi naanị site na ịdezi faịlụ (/etc/rc.conf), ebe ahụ ka anyị hazie netwọkụ ma anyị ga - eme enweghị applet na - ejikwa netwọkụ anyị, anyị na - ahazi daemons na ihe niile, ọ na-egbuke egbuke, ọ bụ ya mere m ji ahọrọ ArchLinux * - *
Site n'ụzọ, njikwa ahụ na-atọ ụtọ na ọ bụrụ na i haziela netwọkụ ị rụnyere "njikọ" ma ọ bụ "elinks" ma mepee kọntaktị ọzọ ma ị nwere ike ịga lelee ntuziaka n'ịntanetị mgbe ị wụnye, ma ọ bụ ị nwere ike ịga google wee ọchụchọ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ihe, na ịkwesighi ịbụ Einstein, ma ọ bụ nwee doctorate ma ọ bụ nzere masta na ihe ọ bụla, naanị ịgụ akwụkwọ ntuziaka na obere ọgụgụ isi arụnyere, n'agbanyeghị na njehie mmadụ na-adị mgbe niile.
Ugbu a enwere nsogbu na kaadị nvidia (nke m na-eji) na xorg-server 1.11.1 site na ebe nchekwa ahụ, mana echere m na xorg bug ahụ edozi, mana enwere nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọ ala, anaghị m. 'Amacha nke ọma ihe niile na-aga, mana ọ bụrụ na onye ọrụ ọhụụ na-enyere repo ule aka ma nwee nvidia, ihe kachasị dị bụ na edeghị ya nke ọma tupu ị wụnye ma nye ya njehie ahụ, mmejọ ahụ dị na archlinux n'ihi na ọ siri ike ọzọ. O doro anya na ọ naghị aga na /etc/pacman.conf, kwuo okwu na ule repo ma tụfuo pacman -Syuu, ma ọ bụ naanị ileghara xorg-server anya ka ọ ghara imelite, ọ ga-ezu na-enweghị ịkwụsị ịnwale ule repository .
JAJAJAJAJA bụ ezigbo onye mmekọ, ọ bụghị ha niile bụ ndị ọrụ tozuru etozu, cheta na enwere ndị ọrụ na ọ bụrụ na itinyeghị ụlọ ọrụ Ubuntu Software na imeghe Synaptic, ha ga-efu 😉
Bịa, dịka ọnụọgụgụ ọnwa anyị, ị bụ troll anyị # 2 HAHAHAHA !!!!
Hahaha ọma, ka Obi ike nweta batrị ma ọ bụ Aga m agafe ya 😀
Site na ihe di nro, oburu na archlinux / gentoo i jiri ya muta, obughi maka nkasi obi, mana mgbe imara ha, ha di aru karie distros (mmadu), odighi agha igbunye uzo ohuru Ọnwa 6, ị nwere njikwa nke usoro gị yana sọftụwia dị ugbu a, n'ezie, dịka ihe ọ bụla, ha nwere uru na ọghọm ha. Mana ikwesighi ịbụ onye maara ihe, iji wụnye ya obere obere ị mụtara ka ị na-aga, site na nnwale na mmejọ ma gụọ. Don'tghọtaghị na ị maara iwu na faịlụ nhazi na mgbe ị hụrụ ya, ọ bụghị na ị bụ onye ọrụ kachasị elu, mana ị na-emeso ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile, na-ekwughị nsogbu niile nke distro nwere ike inye gị na kwa ihe learn mụtara na ọ na-arụ ọrụ, maka ọtụtụ ndị ọzọ distros, ọ bụ ezie na ụfọdụ mgbanwe dị n'etiti distros na nhazi faịlụ, na ọ bụ ihe ịchọpụta otú ha si dị iche tupu ịmalite igwu egwu.
Will ga-ahụ bụ na enweghị m ihe ọ bụla, ọ bụrụ na m na-eji kọmputa maka ịntanetị, ọ dịghị ihe ọzọ, mgbe ụfọdụ iji dezie foto mana maka ihe ọ bụla.
Enweghị m ọtụtụ echiche banyere faịlụ ndị ahụ, amaara m ihe dị na nke ọ bụla na ihe ọ bụ maka mana ọ bụghị ọtụtụ ihe ọzọ, ma ọ bụ na amaghị m iwu Pacman niile.
Kọmputa sayensị abụghị maka m, nke ahụ doro anya, mgbe otu ihe anaghị eme m, ihe ọzọ na-eme m ...
Ekwadoro m ka ị nyocha UTOPIA, distro na Spanish na GNOME 2.x na E17, dabere na slackware na slamd64, o nwere nsụgharị na 32 na 64 ibe (ọ na-etinye 1.5gb's ~)
Anyị na-achọ ndị chọrọ inye aka / imekota:
More na: utopia.freeforums.eu (ndo maka spam)
Onye ọrụ Linux (@taregon) dijo
Echegbula, ma ọ bụrụ na ndị na-eme mgbanwe anaghị enye m nsogbu less
na karia mgbe distro na-adabere na otu n’ime ndi agha ochie ... slackware ... aha ya naanị na-atụ m ụjọ = x n’echiche m na ọ dị mgbagwoju anya karịa arch.
Zaghachi Linux User (@taregon)
Backlaghachi n'iji ụdị ochie nke Ubuntu
Gnome 3.2 dị